The Rohingya News Bank : UNOCHA
Showing posts with label UNOCHA. Show all posts
ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သီးသန့် လွတ်လပ် သော နိုင်ငံတကာ အချက်အလက်ရှာဖွေေး မီရှင်း၏ ထုတ်ပြန်ချက်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သီးသန့် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတကာ အချက်အလက်ရှာဖွေေး မီရှင်း က စစ်တပ်၏ စီးပွားရေးအဆက် အသွယ် များကို ဖော်ထုတ်ကာ ပစ်မှတ်ထားသည့် အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှု များ နှင့် လက် နက်ရောင်းချမှုကို ပတ်ဆို့ရန်တောင်းဆို။
Labels: 2019, mm, UNOCHA, သတင်း, သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
Labels: 2019, en, IFFM, Myanmar Arms Embargo, UN, UNOCHA
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် UNOCHA ၏ ဒုတိယ ညှိနှိုင်းရေးမှူး အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် UNOCHA ၏ အရေးပေါ်ကယ် ဆယ်ရေး ဆိုင်ရာ ဒုတိယညှိနှိုင်းရေးမှူးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရေးရာ လက်ထောက် အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ လူသား ချင်းစာနာထောက်ထားမှုရေးရာ ညှိနှိုင်း ရေးရုံး (UNOCHA) ၏ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာ ဒုတိ ယညှိနှိုင်းရေးမှူး Ms. Ursula Mueller နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Labels: 2019, DASSK, mm, Ms. Ursula Mueller, UNOCHA, မြန်မာ့အလင်း, သတင်း, တွေ့ဆုံ
U.N. fears as many as 30 Rohingya killed in Myanmar assault
Hundreds of Rohingya enter Bangladesh from Budichong, Myanmar, in 2017. File Photo by Abir Abdullah/EPA-EFE
April9(UPI) -- A deadly aerial assault against Rohingya Muslims last week appears to have killed many more than the Myanmar government reported, the United Nations human rights office said Tuesday.
The helicopter attack by the Myanmar military killed many Rohingya in Rakhine State. The government said six people died, but the Office of the High Commissioner for Human Rights said as many as 30 were killed.
Labels: 2019, en, killed, Myanmar, Rohingya, UNOCHA
တပ်မတော်သားတွေ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် တာရှိရင် စိစစ်အရေးယူမည်
လှည့်ကင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ အစိုးရတပ်မတော်သားတချို့ကို တွေ့ရစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှာ တပ်မတော်သားတွေက လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိလို့ ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားတွေနဲ့ တင်ပြလာမယ်ဆိုရင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့အညီ စိစစ်အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးကော်မတီက ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ဒီနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, RFA Burmese, UNOCHA, ကုလသမဂ္ဂ, ဘူးသီးတောင်, ရခိုင်, ရခိုင် တပ်မတော်, ရသေ့တောင်, သတင်း
A Myanmar family displaced by fighting between government troops and the Arakan Army take shelter atadisplacement camp in Kyauktaw township, western Myanmar's Rakhine state, Dec 23, 2018.
Myanmar soldiers and rebel Arakan Army troops exchanged fire for four hours Monday morning near Ohn Chaung village in restive Rakhine state’s Rathedaung township, with soldiers returning with border guards later in the day to search and loot homes, residents said.
Labels: 2019, BGP, en, Loot, Myanmar Army, News, Rakhine, UNOCHA
ထောက်‌ပံ့ကူညီမှု လိုအပ်နေသော ရ‌သေ့‌တောင်‌မြို့နယ်‌၊ သက်‌ပြည်‌ကျ စစ်‌‌ဘေး‌ရှောင်‌ စခန်း။ (ဇန်န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၉ ဓာတ်ပုံ - Rakhine Ethnics Congress)
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ကယ်ဆယ်ကူညီရေး လုပ်ဆောင်နေမှုတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရက ဒီလထဲမှာပဲ တားမြစ်လိုက်တဲ့အတွက် ဒေသခံ အနည်းဆုံး ၅ သောင်းလောက်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးရုံး UNOCHA ရဲ့ မှတ်ချက်ရေး ပြောကြား ချက်ကို ရိုက်တားစ် သတင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, UNOCHA, WFP, ဗွီအိုအေ, ရခိုင်, သတင်း
Labels: 2019, Bangladesh, en, News, UNOCHA, Yanghee Lee
( 21.11.2016 ) 30,000 displaced by violence in northern Rakhine State: UN
By AFP | Monday, 21 November 2016
Up to 30,000 people have been displaced by renewed violence in northern Rakhine State, the UN said on November 18. Half of the displacement occurred over the course of the previous week, when dozens of people died in clashes with the military.
Labels: 2016, Displaced, en, Northern Rakhine, UN, UNOCHA, Violence
( 20.11.2016 ) Myanmar rejects reports army killed Rohingya fleeing Rakhine conflict ( Reuters )
Myanmar's government on Friday rejected accusations by minority Rohingya Muslims that the military has killed residents fleeing the conflict in the northwest of the country, in which at least 86 people have been killed so far and up to 30,000 displaced.Hundreds of Rohingya are trying to escape the military crackdown afterarecent escalation in violence in Rakhine State, residents have told Reuters, adding that some of them have been gunned down while attempting to cross the river that marks the frontier with Bangladesh.
Labels: 2016, en, Myanmar, News, Rakhine, UNOCHA, Yanghee Lee
( 20.11.2016 ) 30,000 displaced by violence in Myanmar's Rakhine: UN Agence France-Presse
YANGON - Up to 30,000 people have been displaced by violence in Myanmar's Rakhine state, half of them over the course of last weekend when dozens of people died in clashes with the military, the UN said Friday.
Violence escalated over the weekend, with state media reporting troops had killed more than 30 people in two days of fighting after the army responded to ambushes by bringing in helicopter gunships.
The UN's special rapporteur on Myanmar, Yanghee Lee, criticised the government led by Nobel Laureate Aung San Suu Kyi for their handling of the crisis and called for "urgent action".
The UN's Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) said 15,000 people were believed to have fled their homes over the space of 48 hours.
"Up to 30,000 people are now estimated to be displaced and thousands more affected by the9October armed attacks and subsequent security operations across the north of Rakhine State," saidaspokesman for the UN OCHA.
"This includes as many as 15,000 people who, according to unverified information, may have been displaced after clashes between armed actors and the military on 12-13 November."
Activists have accused troops of killing civilians, raping women and torching homes -- allegations the government has vehemently denied.
A delegation of UN officials and foreign diplomats madeabrief trip to the area in an effort to get aid deliveries reinstated, which state media has hailed as proof no abuses had been carried out.
The UN's Lee slammed the government's handling of the crisis, and urgedatransparent investigation into accusations of rape and murder by the security forces.
"State Counsellor Aung San Suu Kyi has recently stated that the government is responding to the situation based on the rule of law. Yet I am unaware of any efforts on the part of the government to look into the allegations of human rights violations," Lee said inastatement.
Labels: 2016, en, News, Rakhine, Rohingya, UN, UNOCHA